အမြိုးသမီးမြားအဘို့အချောင် 90s ခြုံငုံ | Buddhatrends
$32.40 $54.00 သငျသညျ (40% Save$21.60)
ရေတပ်အပြာရောင် / S က ရေတပ်အပြာရောင် / M က ရေတပ်အပြာရောင် / L ကို ရေတပ်အပြာရောင် / XL ရေတပ်အပြာရောင် / XXL ရေတပ်အပြာရောင် / XXXL Black က / S က Black က / M က Black က / L ကို Black က / XL Black က / XXL Black က / XXXL Claret နီ / S က Claret နီ / XL Claret နီ / 4XL Claret နီ / 5XL Claret နီ / L ကို Claret နီ / M က Claret နီ / XXL Claret နီ / XXXL ရေတပ်အပြာရောင် / 4XL ရေတပ်အပြာရောင် / 5XL အစိမ်းရောင် / S က အစိမ်းရောင် / XL အစိမ်းရောင် / 4XL အစိမ်းရောင် / 5XL အစိမ်းရောင် / L ကို အစိမ်းရောင် / M က အစိမ်းရောင် / XXL အစိမ်းရောင် / XXXL Black က / 4XL Black က / 5XL Khaki / S က Khaki / XL Khaki / 4XL Khaki / 5XL Khaki / L ကို Khaki / M က Khaki / XXL Khaki / XXXL Beige သ / S က Beige သ / XL Beige သ / 4XL Beige သ / 5XL Beige သ / L ကို Beige သ / M က Beige သ / XXL Beige သ / XXXL ဘရောင်း / S က ဘရောင်း / XL ဘရောင်း / 4XL ဘရောင်း / 5XL ဘရောင်း / L ကို ဘရောင်း / M က ဘရောင်း / XXL ဘရောင်း / XXXL မီးခိုးရောင် / S က မီးခိုးရောင် / XL မီးခိုးရောင် / 4XL မီးခိုးရောင် / 5XL မီးခိုးရောင် / L ကို မီးခိုးရောင် / M က မီးခိုးရောင် / XXL မီးခိုးရောင် / XXXL
ဤရွေ့ကားအလုံးစုံအားဖြင့်အကောင်းဆုံးကိုသင်၏အသားအရေဖြည့်ထားသည့်တဦးတည်းကိုရှာဖွေလှပသောအရောင်များ၏ကျယ်ပြန့သေချာရေတပ်ပါဝင်သည်ရသော 8 ကွဲပြားခြားနားသောအရောင်များ, အနက်ရောင်, claret, အစိမ်း, khaki, အဝါနုရောင်ရှိသော, ကော်ဖီနှင့်မီးခိုးရောင်အတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ သင်သည်သင်၏စုံလင်သောမထိုက်မတန်ကိုရှာဖွေကြောင်းသေချာစေရန်, 5XL - ဒါဟာအစအရွယ်အစားက S အတွက်လာပါတယ်။
လျင်မြန်စွာရောက်ရှိလာခဲ့ပေမယ့်လည်း snug ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါ့အဘို့အလုံအလောက်အဆမတန်ကြီးမားဘူး။
အီး *** ဎ
အားလုံးမှာတင်းကျပ်စွာနှင့်အလွန် comfy မဟုတ်တကယ်ပဲကောင်းသောမထိုက်မတန်။ သငျသညျသြစတြေးလျသို့မဟုတ်ဗြိတိန်အရွယ်အစားအရွယ်အစား 16 ရောက်နေတယ်ဆိုရင်သင်ကအရမ်းကြပ်သို့မဟုတ်လွန်းကြီးတွေမလိုချင်ကြဘူးလျှင်တစ်ဦး XXL သို့မဟုတ် XXXL စုံလင်သည်
V ကို *** ဃ
ကို C *** ဎ
ဒီကနေဝယ်ဖို့တို့သည်ကြီးစွာသောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ ဂရိတ်ခြုံငုံ။
S က *** ဌ
Excellent က dungarees, ငါ၏ဒုတိယ pair တစုံမကြာမီ 3rd pair တစုံမှာပါလိမ့်မယ်။ မြင့်မားဖို့အထူးအကြံပြုလိုတယ်
Z ကို *** r
J ကို *** s ကို
အလွ, ကျေးဇူးတင်ပါတယ် - ငါသည်ငါ့မြေးကဤအတူအလွန်ပျော်ရွှင်ပါလိမ့်မည်ထင်
ငါ defs ပင်အက်စ်မှ M ကသွားပြီတော့သင့်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပစ္စည်းကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်သည်!
W *** s ကို
ငါကအကြီးမထိုက်မတန်ချစ်ကြတယ်။ ကျိန်းသေနောက်တဖန်မဝယ်မယ်လို့ !!!
ကျွန်မအိတ်နှင့်တူသောအပျနှံဖို့ပြီးပြည့်စုံသော thanx သာ2နှင့်တစ်နှစ်ခွဲရက်သတ္တပတ်ကိုကြည့်ဘို့ဤအချိန်ပိုကြီးအမိန့်အမိန့် 2nd အချိန်
ခြုံငုံဂရိတ်သို့သော်ကျွန်မအနည်းငယ်စိတ်မကောင်းပါဘူး, ငါမှပိုပြီးလှပသလိုပဲ, ဒါပေမယ့်သူကအရသာတစ်ခုကိစ္စရဲ့ပုံထဲကအညိုရောင်အရောင်ရွေးယူကြ၏။ ငါသည်အလျင်အမြန်အပ်ဿုံကောင်းတဲ့ထည်ထိုင်တော်မူ၏။ ယခုငါ) အခြားတဦးတည်းသော်လည်းကွဲပြားခြားနားသောအရောင်ချင်
ကို C *** r
ဂရိတ် rompers! ကောင်းသောအရည်အသွေးမိုးသည်းထန်စွာပစ္စည်း။ nice မထိုက်မတန်! ကနေဒါမှတင်ပို့2ရက်သတ္တပတ်။
အလွန်ချစ်စရာပေမယ့်အလွန်ချောင်ပြေး, အာရှ XL အစား XXXL ၌ငါ၏မူရင်းအရွယ်အစားဝယ်၏သငျ့သညျ။
nice kombez ။ အလွန်ကောင်းသည်။ လျင်မြန်စွာရောက်လေ၏။ ထွက်ကပ်အနည်းငယ်ချည်။ စံပြသူတို့မရှိဘဲသောကွောငျ့, ခလုတ်ချုပ်ခဲ့ရတယ်။
အဆိုပါလမ်းကြောင်းစောင့်ကြည့်သည်မဟုတ်သုံးပတ်သည်ဣသရေလအမျိုးသို့ရောက်ကြ၏။ အရည်အသွေးဓာတ်ပုံထက်အရောင်ပေါ့ပါးအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ 175 ၏တိုးတက်မှုနှင့် parameters တွေကို 89-65-95 အရွယ်အစားမီတာကိုယူ။ ဒါပေမယ့်ငါကပိုအခန်းထဲမှာချင်တယ်။ အရှည်မြင့်မားသောအဘို့သင်အနည်းငယ် tuck ပင်နိုင်ပါတယ်သင့်လျော်သည်။
H ကို *** တစ်ဦး
cool ဝတ်စုံကို, အချိန်တွင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဝမ်းပေါ်တွင်မီတာအမိန့်, ကြီးထွားခြင်းနှင့်အရှည် 168 မှာကောင်းသောဖြစ်ပါတယ်မှအခန်းတစ်ခန်းရှိပါတယ်။ အကြောင်းကို3ပတ်ရုစ်မှမြန်ဆန်ပေးပို့။
, ထိုးဘောင်းဘီမပါဘဲအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ Hooligans kombez အလုံအလောက်ရှည်လျားဖော်ပြချက်နှင့်အတူအပြည့်အဝကိုက်ညီနေသည်
ငါ supeeer အရွယ်အစား 50-52 ဿုံအခမဲ့ထိုင်လျက်, ထိုသုံးသပ်ချက်များကိုယူရှိသမျှကိုဓာတ်ပုံတစ်ပုံ၌ရှိသကဲ့သို့, အထည်မတောက်ထူက, ငါ Novosibirsk ခုနှစ်, 712r များအတွက်ဆက်သားအိမ်ပြန်ယူ
R ကို *** တစ်ဦး
ကျိန်းသေချောင်မထိုက်မတန်, ဂရိတ်အရည်အသွေးနှင့်နောက်တဖန်မဝယ်လိမ့်မယ်။ ကျွန်မရုပ်ပုံကို upload တင်မယ်လို့သော်လည်းငါ့ဖုန်းကိုအဘယ်သူမျှမသိုလှောင်မှုရှိပါတယ်။ အပိုင်းအစက၎င်း၏ရုပ်ပုံကိုမှမှန်သည်။
တစ်ဦးကအကြီးအဝတ်စုံကို။ သဘာဝအထည်အဘယ်မှာရှိချည်မျှင်တစ်ခုခုကပ်ပေမယ့်အရေးပါမဟုတ်ပါဘူး။ ဓာတ်ပုံ၌ရှိသကဲ့သို့တစျခုတှငျတစျခု။5+ ။ အလွန်အဆင်ပြေ။
K သည် *** y က
1Fabulous! ငါဗြိတိန် 18 နှင့် 4xl ဿုံ fit ဖြစ်၏။ nice နှင့် comfy cotten ပိတ်ချောအမျိုးအစားထည်။7ကာလ၏ဗြိတိန်မှစူပါအစာရှောင်ပေးပို့!
တင်ပါး 123 တွင်, 2xl အမိန့်ထုတ်နိုင်ပါတယ်။ ဆန့်ခြေအိတ်၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်
ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများအဘို့ကြီးသော Kombez) ​​ကြီးမားကျယ်ဝန်းနှင့်ဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးကျွန်မအကြံပြု
ကှကျချည်ထွက်ကပ်ပါဘူး, အကြောင်းကို3ရက်သတ္တပတ်, ကောင်းသောထည်ရောက်ရှိလာခဲ့ပေမယ့်မျှခလုတ်လည်းမရှိ, အဘယ်သူမျှမချုပ်မရဘယ်မှာအခြား
အလွန်အေးမြနဲ့အဆင်ပြေ <3 ကျေးဇူးတင်ပါသည် XO
ဂရိတ်ဝတ်စုံနှင့်အကြီးစားအစာရှောင်ပေးပို့! ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, ပိုမိုအမိန့်ပါလိမ့်မယ် !!!!
V ကို *** တစ်ဦး
N ကို *** က c
အံ့သြဖွယ်ဘောင်းဘီ! အစာရှောင်ခြင်းရေကြောင်း။ အကြီးအရညျအသှေး။ အလွန်အဆင်ပြေ။ ပိုပြီးမဝယ်ပါလိမ့်မယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
အဆိုပါအဝတ်အစားခလုတ်မရှိပါ။ ငါအကြာတွင်ခလုတ်နဲ့မှုနှုန်းကိုထည့်သွင်းပါလိမ့်မယ်။ ကြံ့ခိုင်ထူ, အရည်အသွေးကောင်းသော။
ကိုယ့်ပုံအလွန်အရည်အသွေးကောင်းအဖြစ် Jumpsuit, ထည်အရေပြားကိုထိ :) အရွယ်အစားငါ့အဘို့နည်းနည်းများလွန်းကြီးတွေဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ငါက L အရွယ်အစားအမိန့်ရှိသည်ဟုမည်သို့ပင်ဆိုစေကိုယ်ကဝတ်ထားပျော်မွေ့ကြလိမ့်မည်အမ်အမိန့်ထုတ်သင့်သည့်အခါကောင်းတဲ့ခံစားချက်။ မြင့်မားဖို့အထူးအကြံပြုလိုတယ် !!!
K သည် *** s ကို
ကြိုက်တယ်။ အရွယ်အစားဇယားပေါ်တွင်သင်၏အရွယ်အစားအခြေစိုက်စခန်းနှိုငျးယှဉျ။ အခန်းအများအပြားရှိပါသည်။
အဆိုပါအမိန့် 10 နေ့ရက်ကာလအဘို့စိန့်ပီတာစဘတ်မြို့သို့ရောက်လေ၏။ အေးမြဝတ်စုံကို, အတိအကျပုံနဲ့တူ 175 ၏တိုးတက်မှုကြည့်, 64 ကီလိုဂရမ်အရွယ်အစား L ကိုဿုံထိုင်တော်မူ၏။ ငါကပိုကွဲပြားခြားနားသောအရောင်များကိုအမိန့်ပါလိမ့်မယ်။
Excellent က dungarees ။ ဂရိတ်မထိုက်မတန် Highly ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကြံပြု
ငါအရွယ်အစားဌကို ရွေးချယ်. , ထိုသို့လွန်းကြီးတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အမှားသတ္တုတွင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ မော်ဒယ်ကျယ်ပြန့်သည်။
ဒါဟာအလွန်များစွာ 14 နှစ်ပေါင်းမိန်းကလေးအမိန့်ပေးခဲ့သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
အဆိုပါအမိန့်အားခြေရာခံဖို့2ရက်သတ္တပတ်လမ်းကြောင်းများအတွက်ရောက်လာတယ်။ ငါအတွက်ယူပါလိမ့်မယ်အလွန်ကြီးမားတဲ့အမေကိုယူ။ ပစ္စည်းကောင်းလှ၏
2 အရောင်များ Gradient Long က Hippie Dress
2 အရောင်များ Gradient Long က Hippie Dress $40.80 $68.00
3 /4တာရှည်ပန်းမိန်းမဆောင်ဘောင်းဘီ
3 /4တာရှည်ပန်းမိန်းမဆောင်ဘောင်းဘီ $52.70 $62.00
3 /4ရှည်သဘာဝတရားအတုယူမိန်းမဆောင်ဘောင်းဘီ
3 /4ရှည်သဘာဝတရားအတုယူမိန်းမဆောင်ဘောင်းဘီ $52.70 $62.00
တစ်ဦးကလိုင်းတော်ဝင်အပြာရောင် Long က Sleeveless Maxi Dress
တစ်ဦးကလိုင်းတော်ဝင်အပြာရောင် Long က Sleeveless Maxi Dress $53.40 $89.00
စိတ္တဇ Print အဖြူရောင် & အပြာရောင်အဆမတန်ကြီးမား Dress
စိတ္တဇ Print အဖြူရောင် & အပြာရောင်အဆမတန်ကြီးမား Dress $71.20 $89.00
အာရှအနုပညာ Kaftan Maxi Dress
အာရှအနုပညာ Kaftan Maxi Dress $57.60 $72.00
အချိုးမညီ Sleeveless မီဒီ Dress
အချိုးမညီ Sleeveless မီဒီ Dress $40.80 $68.00